Methylphenidate (မီသိုင်းလ်ဖန်နီဒိတ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Methylphenidate (မီသိုင်းလ်ဖန်နီဒိတ်)
Methylphenidate (မီသိုင်းလ်ဖန်နီဒိတ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Methylphenidate (မီသိုင်းလ်ဖန်နီဒိတ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Methylphenidate (မီသိုင်းလ်ဖန်နီဒိတ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Methylphenidate (မီသိုင်းလ်ဖန်နီဒိတ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
အခြေအနေမသက်သာဘူးဆိုရင် သို့ ပိုဆိုးလာတယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်ကိုပြောပြသင့်ပါတယ်
Methylphenidate (မီသိုင်းလ်ဖန်နီဒိတ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Methylphenidate (မီသိုင်းလ်ဖန်နီဒိတ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
methylphenidate သို့ အခြားသောဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်မှုတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်
ကြွက်သားတွန့်ခြင်း သို့ Tourette’s syndromeမျိုးရိုးထဲမှာ ရှိဘူးမယ်ဆိုရင်
အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ခြင်း၊ တင်းအားများခြင်း၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်းများ (စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ဆေးတွေဟာ ဒီလက္ခဏာတွေကိုပိုဆိုးစေပါတယ်။ )
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Methylphenidate (မီသိုင်းလ်ဖန်နီဒိတ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Methylphenidate (မီသိုင်းလ်ဖန်နီဒိတ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ မမှန်ခြင်း၊ မညီခြင်း
ဖျားခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း ၊ အရေပြားပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါက်ပြဲခြင်း၊ ကွာကျခြင်း ၊ အနီရောင်အဖိမ့်များထခြင်း
ရန်လိုခြင်း၊ ကနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း၊ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အပြုအမူများ၊ ကြွက်သားများတွန့်ခြင်း
အလွယ်တကုူပေါက်ပြဲလွယ်ခြင်း၊ အရာပြားပေါ်တွင် အပြာရောင်အစက်များပေါ်ခြင်း
အသက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်လောက်အောင်သွေးတိုးခြင်း ( အပြင်းအထန်ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အမြင်ေဝဝါးခြင်း၊ နားအူခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ မေရေမရာဖြစ်ခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း၊ တက်ြခ်ငး
အမြင်ဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ မူးဝေခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း
ချွေးထွက်ခြင်း ၊ အရေပြားအဖိမ့်ထခြင်း
ထုံခြင်း၊ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းဖြစ်ခြင်း၊ လက်ခြေအေးခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Methylphenidate (မီသိုင်းလ်ဖန်နီဒိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
warfarin (Coumadin, Jantoven)ကဲ့သို့သောသွေးကျဲဆေးများ
pseudoephedrine or phenylephrineစတဲ့ရင်ကျပ်ပျောက်ဆေးတွေပါဝင်တဲ့ အအေးမိဓါတ်မတည့်ခြင်းဆေးများ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Methylphenidate (မီသိုင်းလ်ဖန်နီဒိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Methylphenidate (မီသိုင်းလ်ဖန်နီဒိတ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
စိတ်ကျခြင်း၊ စိတ်မကျန်းမာခြင်း၊ စိတ်ကျစိတ်ကြွခြင်း၊ ရူးခြင်း၊ သတ်သေလိုသည့်အတွေးများကြိုးပမ်းမှုများ
ကြွက်သားတွန့်ခြင်း သို့ Tourette’s syndrome
ဆေး သို့ အရက်စွဲဖူးခြင်း
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Methylphenidate (မီသိုင်းလ်ဖန်နီဒိတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ဝါးစားရနိုင်တဲ့ဆေးပြားများ(Ritalin, Methylin, methylphenidate)အပါအဝင် ချက်ချင်းထုတ်ပေးနိုင်သောဆေးပြားများ
အစောပိုင်းပမာဏ – 10 mg သောက်ဆေး တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ် နေ့စဉ်
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ဆက်လက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- အပတ်စဉ်5to 10 mgထိတိုးပေးပြီး အများဆုံးတစ်နေ့ပမာဏ60 mg ရောက်တဲ့အထိ တိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
တဖြည်းဖြည်းထုတ်လွှင့်ပေးသောဆေးပြားပုံစံ(Ritalin SR, Metadate ER)
အစောပိုင်းပမာဏ- အချိန်၈နာရီလောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုပေးတဲ့ 10 mg and 20 mgဆေးပြားတွေအနေနဲ့ ရနိုင်ပါတယ်။
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ဆက်လက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ-အပတ်စဉ် 10 mgထိတိုးပေးပြီး အများဆုံးတစ်နေ့ပမာဏ60 mg ရောက်တဲ့အထိ တိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ မနက်စာမစားခင်ပထမဆုံးဆေးပမာဏကို သောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်လွှင့်မှုချဲ့ပေးတဲ့ဆေးတောင့်ပုံစံ (Metadate CD):
အစောပိုင်းပမာဏ- 20 mgသောက်ဆေး၊ တစ်နေ့တစ်ကြိမ် မနက်ပိုင်းမနက်စာမစားခင်
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ဆက်လက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ-အပတ်စဉ် 20mgထိတိုးပေးပြီး အများဆုံးတစ်နေ့ပမာဏ60 mg ရောက်တဲ့အထိ တိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ် မနက်ပိုင်းတွေမှာ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထုတ်ပေးမှုချဲ့ထားတဲ့အမှုန်များပါအရည်သောက်ဆေး (Quillivant XR)
အစောပိုင်းပမာဏ- (Methylphenidate- naive patients) 20 mgသောက်ဆေး၊ တစ်နေ့တစ်ကြိမ် မနက်ပိုင်းမနက်စာမစားခင်
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ဆက်လက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ-အပတ်စဉ် 18mgထိတိုးပေးပြီး အများဆုံးတစ်နေ့ပမာဏ72 mg ရောက်တဲ့အထိ တိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ် မနက်ပိုင်းတွေမှာ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမအပတ်10 mg/9 hour patchနေ့စဉ်
ဒုတိယအပတ်15 mg/9 hour patch dailyနေ့စဉ်
တတိယအပတ်20 mg/9 hour patch dailyနေ့စဉ်
စတုတ္ထအပတ်30 mg/9 hour patch dailyနေ့စဉ်
အစောပိုင်းပမာဏ – 10 mg သောက်ဆေး တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ် နေ့စဉ် အထူးသဖြင့် အစားမစားခင် မိနစ်၃၀မှ၄၅အတွင်း
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ဆက်လက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- အပတ်စဉ်5to 10 mgထိတိုးပေးပြီး အများဆုံးတစ်နေ့ပမာဏ60 mg ရောက်တဲ့အထိ တိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ အချို့သောလူနာတွေမှာ 10 to 15 mgနေ့စဉ်ပေးခြင်းက လုံလောက်စေပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Methylphenidate (မီသိုင်းလ်ဖန်နီဒိတ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အစောပိုင်းပမာဏ – 2.5 to5mg သောက်ဆေး တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် နေ့စဉ် နေ့လည်စာနေ့ခင်းစာအစားမစားခင် မိနစ်၃၀မှ၄၅အတွင်း
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ဆက်လက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ- အပတ်စဉ်5to 10 mgထိတိုးပေးပြီး အများဆုံးတစ်နေ့ပမာဏ60 mg ရောက်တဲ့အထိ တိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ခွဲပေးနိုင်ပါတယ်။
အစောပိုင်းပမာဏ- အချိန်၈နာရီလောက်အကျိုးသက်ရောက်မှုပေးတဲ့ 10 mg and 20 mgဆေးပြားတွေအနေနဲ့ ရနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆေးပြားတွေချိန်ညှိထားတဲ့ပမာဏနဲ့ တဖြည်းဖြည်းထုတ်ပေးတဲ့ဆေးပြားတွေပမာဏချင်းတူနေမယ် (၈နာရီထက်ပိုမကြာဘူးဆိုရင်) ပုံမှန်ဆေးပြားတွေ အစားတဖြည်းဖြည်းထုတ်ပေးတဲ့ဆေးပြားတွေကို အစားထိုးသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ဆက်လက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ-အပတ်စဉ် 10 mgထိတိုးပေးပြီး အများဆုံးတစ်နေ့ပမာဏ60 mg ရောက်တဲ့အထိ တိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ မနက်စာမစားခင်ပ ထမဆုံးဆေးပမာဏကို သောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရောဂါထိန်းသိမ်းရန်ဆက်လက်အသုံးပြုသင့်သည့်ပမာဏ-အပတ်စဉ် 10 mg to 20mgထိတိုးပေးပြီး အများဆုံးတစ်နေ့ပမာဏ60 mg ရောက်တဲ့အထိ တိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ် မနက်ပိုင်းတွေမှာ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အများဆုံးအသုံးပြုနိုင်သည့်ပမာဏ- အသက်၆နှစ်မှ၁၂နှစ်အထိ : 54 mg/day,အသက်၁၂နှစ်အထက် : 72 mg/day၊2mg/kg/day.ထက်မပိုသင့်ပါဘူး
Methylphenidate (မီသိုင်းလ်ဖန်နီဒိတ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
ဆေးတောင့် ထုတ်ပေးမှုချဲ့ထားသောပုံစံ သောက်ဆေး : 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg.